सृमिद्धको लागि आत्मनिर्भर बन्ने मार्ग धेरै छन्ः पौडेल – Daunne News
सृमिद्धको लागि आत्मनिर्भर बन्ने मार्ग धेरै छन्ः पौडेल
Daunne News	 प्रकाशित : आश्विन ३०, ११:५८
आफ्नै गृह जिल्लाको त्यो पनि संस्थापक जिल्ला समन्वय अधिकारी बन्ने मौका निक्कै कमलाई मात्र मिल्छ होला। त्यस्तै निक्कै कम मध्येका एक हुन् नवलपुर जिल्ला अर्थात नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वबाट यही साता विदा भएर जानु भएका विजयराज पौडेल। कावासोती घर भएको विजयराज पौडेल नवलपुर जिल्ला बनदेखि नवलपुरमा कार्यरत हुनुभयो। उहाँलाई विदाईको वखत नवलपुरको सम्भाव्यताको आधार र उहाँको काम गराईको अनुभवमा आधारित रहेर शोभा जिसीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश
नवलपुको बसाई कस्तो रहयो ?
मेरो घर बसोबास पनि यहि जिल्ला हो। नवलपुरको बसाई सुखःद रह्यो। सन्तुष्टी मिल्ने गरी बसेको महशुस भएको छ।
आज सम्मको बसाईलाई फर्केर हेर्दा नवलपुरको सम्भाव्यतालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
नवलपुर जिल्ला तराई र पहाड समेटीएको जिल्ला हो। यो जिल्लामा पयर्टनको विकास, आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरु, धार्मिक तथा ऐतिहासिक प्रतिष्ठानहरु प्रशस्त मात्रामा छन्। कृषी जन्य उपजहरुको पनि हामीले प्रशस्त उत्पादन गर्न सक्छौँ। नगदेबाली लगायत फलफूलहरु पनि नवलपुर जिल्लामा प्रशस्त पाइन्छ। सबैलाई समायोजन गएर उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भन्ने यो जिल्लाको समृद्धिको सम्भाव्यता देखेको छु।
नवलपुर जिल्ला सबैभन्दा सानो र कान्छो जिल्ला पनि हो, यो जिल्लालाई अगाडि बढाउन कस्ले के के गनुपर्ने देख्नु हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला यो जिल्लालाई यहाँका माननीय सदस्य तथा जनप्रतिनिधिज्यूहरुले विकास बजेट केन्द्रबाट र प्रदेशबाट प्रयाप्तमात्रामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि स्थानीय सरकारले प्राप्त भएको बजेट समुचीत रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ। यहाँका सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो आफ्नो कार्यालय अन्तगर्त आएका बजेटहरु सदुपयोग गरेर विकास निर्माणमा लैजानु पर्छ। नागरिक समाज र जनताहरु सुशुचित हुनु पर्दछ र खबरदारी गर्नु पर्छ। यो सबै कुराहरुको समायोजन मिल्यो भनी यो जिल्लाको विकास र सम्भावनालाई स्पष्ट पार्न सकिन्छ।
नवलपुर जिल्ला आफैमा आत्मनिर्भर बन्ने मार्ग के के छ ?
यसमा मैले अघि पनि उल्लेख गरे यसमा यहाँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी जिल्ला हो। हामीले प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न गरेर, आर्थिक आम्दानी राजश्वमा वृद्धि गराउन सकियो भने यो जिल्लाको विकासमा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ भएका पर्यटकीय क्षेत्रबाट आर्थिक उपपार्जन सकिन्छ। यो जिल्लाको सृमिद्धको लागि आत्मनिर्भर बन्ने मार्ग धेरै छन्।
नवलपुर जिल्लामा बसेर काम गरिरहदा सम्झन लायक काम केही छन् ?
मेरो आफ्नो हकमा भन्ने हो भने नवलपुर जिल्ला मेरो गृह जिल्ला पनि हो। म यहाँ आउ“दा नवलपुर जिल्ला बनेको थिएन्। यो जिल्लाको संस्थापकको जिल्ला समन्व्य समितिको रुपमा म आएको थिए“। मैले सम्झन लायक तथा आफूलाई गौरव लाग्ने काम भनेकै मैले नयाँ जिल्ला स्थापना गर्नको लागि मेरो महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। म आइसके पछि मात्र यो नयाँ जिल्ला बनेको हो। सरकारी कार्यालय त्यसपछि स्थापना भएका हुन् त्यसको सुरुवात म आफैले गरेको हो। जिल्ला स्थापना गरें यो मेरो सबै भन्दा ठूलो कुरा सोचेको छु। त्यसपछि अन्य जिल्ला समन्व्य समितिको टिमलाई जिल्लाको विकासको प्रकृयाको बारेमा अगाडि बढाउने क्रममा उहाँहरुलाई हातेमालो गदै म अगाडि बढें। हामीले स्थानीय तहहरुसँग विभिन्न कुरामा समन्वय गरेर संक्रमण अवधिमा स्थानीय तहलाई पनि स्पष्ट पार्ने र सहयोग गर्ने काम गरियो। त्यो भन्दा पनि अर्को सम्झनलायक गत जेष्ठ र असारमा करिब दुई महिना नै सबै स्थानीय तहहरुमा गएर जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तालिमहरु सम्पन्न गरियो त्यति बेला म दुई महिना नै तालिममा खटिएँ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अन्योलमा परेको कुरा स्पष्ट भयो। जिल्ला समन्व्य समिति एक वर्षसम्म राम्रोसँग अगाडि बढे् म यस मै खुशी छु।
यो जिल्लाबाट विदाई भई सक्नु भएको छ नवलपुरबासीलाई केही भन्न चाहन्नु हुन्छ ?
नवलपुरबासी सम्पूर्ण राजजितिक दल, माननीय संभासद ज्युहरु, समस्त कर्मचारी मित्रहरु, सुरक्षाका साथीहरु, नागरिक समाज र सबै जनसमुदायलाई पहिलो प्रथमतः म यहाँ आएर नयाँ जिल्ला स्थापना गरेर यो जिल्लामा रहने क्रममा यहाँहरुले सहयोग गर्नुभयो। यसको लागि म सम्पूर्णमा अभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नवलपुर जिल्लालाई समृद्धि तिर अगाडि लैजानलाई यहाँहरुको आत्मबल, दृढ संकल्प, इच्छा, शक्ति देखिनु पर्छ। अन्तमा नवलपुरबासीहरु यहाँको विकास र समद्धिका लागि अगाडि बढ्ने आशा र निवेदन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
फरक प्रस· दशै नजिकिएको छ दशैलाई कसरी मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
दशै सामान्य तरिकाले नै मनाउने तयारीमा छु ।
दशै नेपालीहरुको महान चाड तर कतिपयलाई दशैं दशा बनेर आउछ“ । तपाईको कुनै टिप्पणी?
यो विषयमा तपाईले उठाउनु भएको कुरा सन्दर्भीक छ। दशै आउ“छ धेरैलाई दशा पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले दशैलाई आफ्नो गक्ष हेरेर दशैलाई दशाको रुपमा परिणत नगरी दशंैलाई सामान्य तरीकाले तडकभडक नगरी आफ्ना आफन्तसँग खुशी साटसाट गरी मनाउनु पर्छ।
बुढेसकालमा भाइरल भेलु बाजेको सिरियलमा गरे धुमधाम बिबाह ( भिडियो हेर्नुहोस् )
सागर, बसन्ते, किस्ने तेरो दाई मिदी भयो भन्ने भाईरल भाई ड्रे’स लगेका दाई सङ्गै मीडियामा, भन्छन जागीर…
ललितपुरको मेयर बन्ने नायिका करिश्माको चाहाना, जिम्मेवारी नपाए पार्टीमा किन लाग्ने ?